IXiaomi Mi 9T ene-128 GB iyaqhubeka ukuthengiswa eSpain | I-Androidsis
IXiaomi Mi 9T ene-128 GB esele ifumaneka eSpain
IXiaomi Mi 9T yinguqulelo yamanye amazwe yeRedmi K20, iboniswe ngaphezulu kwenyanga ephelileyo. Le fowuni Yathengiswa eSpain kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, nangona ekwenzile kuphela kwiinguqulelo zayo ezimbini. Okokugqibela, uphawu lwaseTshayina lubhengeza ukuba ingxelo yefowuni ene-128 GB yokugcina sele ithengisiwe kwilizwe lethu ngokusemthethweni.
Ukuze abasebenzisi babe nakho ukukhetha yeyiphi kwezi nguqu zimbini kwesi sixhobo ofuna ukuyithenga kwimeko yakho. Inguqulelo ene-64 GB yokugcina okanye iXiaomi Mi 9T ene-128 GB yokugcina. Zonke ezinye iinkcukacha zihlala zingatshintshanga kule meko.
IXiaomi Mi 9T yifowuni entsha yenqanaba eliphakathi kuluhlu lwegama laseTshayina. Yenza ukusetyenziswa kweSpapdragon 730 njengeprosesa, eyi-chip yeQualcomm ehlaziyiweyo kweli candelo kwaye ithatha ubungqina be-710, eyenye yezona zidume kakhulu kule minyaka mibini idlulileyo. Iprosesa ephuculweyo kunye nokusebenza okungcono komdlalo.
Ngokumalunga nexabiso, yayisele ibonakalisiwe xa ifowuni yayipapashwa ngokusesikweni kwilizwe lethu. Singayithenga nge-369 euro. Ifowuni iyathengiswa kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso, ezinjengewebhusayithi yenkampani. Ukongeza kwezinye iivenkile apho iifowuni zabo zihlala zifumaneka.
Ke ukuba unomdla kule Xiaomi Mi 9T ene-128 GB yokugcina, Kuya kuba lula kuwe ukuyifumana. Inikwe njengokhetho olupheleleyo kweli candelo lomgangatho ophakathi kuluhlu. Ke ngokuqinisekileyo iba yinto entsha kumenzi waseTshayina.
Ngelixa le nguqulo yeXiaomi Mi 9T sele ithengisiwe, Silindele ukufika kweMi 9T Pro. Awunawo umhla wokukhutshwa, nangona isandula ukuqinisekiswa, Ke ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba sikwazi ukuwuthenga ngokusemthethweni eSpain. Ngokuqinisekileyo kwiiveki ezimbalwa lisemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 9T ene-128 GB esele ifumaneka eSpain
I-Oppo engaqondakaliyo ene-Snapdragon 665, i-5000 mAh ibhetri kunye nokunye kuqinisekisiwe